ရုံအက | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Lady Ga-ga သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အဲဒီမှာယခုတစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီ ကိုယ့်အက။ အဲဒါကိုကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကမထုတ်နိုင်ဘူး ငါက Ga-ga-ooh-la-la ရဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပေမယ့် Top 40 hits အားလုံးကငါ့သမီးကိုရေဒီယိုဖွင့်ပြီးသီချင်းစလုပ်တယ်။ ငါကူညီပေမယ့်တလျှောက်တွင်မနာသီချင်းဆိုနိုင်။
Just Dance သည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းအကန့်အသတ်ဖြင့်ခုန်ချခြင်းနှင့်လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အက!
ဒီတစ်ပတ်နယူးအော်လင်းမှာစတန့်မိန့်ခွန်းပြောနေတာပါ Webtrends ထိတွေ့ ညီလာခံ။ ဘလော့ဂ်မလုပ်ချင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်လိုသောကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးသတင်းစကားမှာရှေ့သို့ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သတင်းစကားရဲ့အရည်အသွေးကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့ကလူမှုရေးမီဒီယာကိုအသုံးပြု။ ရှေ့မှောက်၌ထွက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များရှေ့တွင်ရှိနေရမည်။ ဘယ်လိုလဲ? ကုမ္ပဏီများသည်အာရုံပျံ့လွင့်စရာအားလုံးကိုလျစ်လျူရှုရန်လိုအပ်သည် ကိုယ့်အက ဒါကြောင့်လူမှုမီဒီယာမှကြွလာသောအခါ။ နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုရယူပါ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကနေထွက် ထွက်၍ စီရင်ပါ။
Indianapolis ရှိလေဆိပ်မှမထွက်ခွာမီလွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ထံမှအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လူမည်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့လှုံ့ဆော်မှုမိန့်ခွန်းတွေကြောင့်သူနဲ့သမ္မတကိုတွေ့ဆုံဖို့အိမ်ဖြူတော်ကသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကအံ့သြစရာကောင်းသည်။ သူ၏သတင်းစကားသည်သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူက ၂၀၁၀ သည်လူတို့၏ကြီးမြတ်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ဆင်ခြေပေးခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အခြားသူများကိုအပြစ်မတင်သင့်ပါ။ လူတိုင်းနက်ရှိုင်းစွာတူးပြီးသူတို့၏ဘုရားသခင်ပေးသောစွမ်းရည်နှင့်အညီနေထိုင်ရမည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်သောသတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရမှပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်မှာခဲယဉ်းစွာအလုပ်လုပ်သည်၊ လေယာဉ်ဆင်းချိန်မှာငါကိုက်စားနေတယ် Linchpin - မင်းမရှိမဖြစ်လား။။ အခုလူတွေကအလုပ်မရှိတော့ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ၄၀၁ ကီလိုဂရမ်ပျောက်သွားပြီ၊ ယုတ်လျော့သွားတယ်။ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးမုသားပဲဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။
ရှေ Godin ရေးသားခဲ့သည်
သင်တန်ဖိုးရှိသည့်အရာကိုရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာထင်ရှားပေါ်လွင်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလုပ်အားပေးမှု၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူများအနေဖြင့်နက်ရှိုင်းစွာဂရုစိုက်သောအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤတိုင်းပြည်နှင့်ပါရမီရှိသူအားလုံးကိုဒူးထောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုရပ်တန့်စေသည့်အဆုံးမဲ့နံပါတ် (Seth Godin ၏အသုံးအနှုန်း) နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်ကစားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ မင်းရဲ့နယ်ပယ်ကိုရှာပါ၊ naysayers တွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့။